‘छक्का पञ्जा ३ : आक्रामक ओपनिङको प्रतिक्षामा - Nepali Cinema News
Home > Nepali > ‘छक्का पञ्जा ३ : आक्रामक ओपनिङको प्रतिक्षामा
‘छक्का पञ्जा ३ : आक्रामक ओपनिङको प्रतिक्षामा
October 09, 2018 Nepali
‘छक्का पञ्जा’को तेस्रो श्रृंखला बुधबार रिलिज हुँदैछ । मल्टिप्लेक्स बुकिङ र प्राप्त सोज हेर्दा लाग्छ, आँधीका लागि बक्सअफिस तयार छ । ३० सोज र देशव्यापी बुकिङ उच्च । प्रारम्भिक गणित भन्छ : ओपनिङ कलेक्सन नेरु करोड ग्रस हुनसक्छ ।
‘छक्का पञ्जा’ ब्रान्डलाई प्राप्त मिश्रित ट्रेलर रिभ्यूले प्रभावित तुल्याएन । बरु, बुधबारका लगभग सबै सोज उच्च अकुपेन्सीसहित प्रदर्शनका लागि रेडी छन् । मल्टिप्लेक्स होस् वा एकल पर्दामा, लामो समयपछि हलमा लागेको खडेरी मेटिने अपेक्षा छ ।
प्रक्षेपण भन्छ, ओपनिङ ग्रस करोड माथि हुनसक्छ । सूचक हेर्दा लाग्छ । ओपनिङ आक्रामक हुनेमा शंका छैन, यद्यपी निरन्तरता ‘वर्ड अफ माउथ’मा निर्भर हुनेछ । किनभने, यसपटक छक्का पञ्जा परिचित जनरबाट पछि हटेको छ ।
यो एउटा लिटमस् टेस्ट पनि हो । समिक्षकले बारम्बार भन्नेजस्तो, केही पहिलेसम्म मास डिफाइन कमेडीले गथ्र्यो । छक्का पञ्जाको तेस्रो श्रृंखलाले अर्को परिक्षण गर्दैछ । ‘छक्का पञ्जा ३’ भित्र केही उत्तर लुकेका छन् । त्यो हो ः कमेडीको विकल्पका लागि नेपाली दर्शक तयार छन् वा छैनन् ? के मास डिफाइन अरु जनर हुन सक्दैन ?
दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले एउटा जोखिम मोलेकै हुन् । जसको नतिजा आमदर्शक भन्दा क्रिटिक्स जान्न चाहन्छन् । यदि छक्का पञ्जा ३ पहिलेजस्तै ब्लकबस्टर बन्यो भने बुझे हुन्छ, कमेडी मात्र नेपाली फिल्मको मास डिफाइन हुन सक्दैन । बरु, कथ्य कसरी समाजसँग जोडिन्छ र ब्रान्डले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने तथ्य स्थापित हुनेछ ।